Ntọala Hookah ebugharị na akpa nchekwa na -ewu ewu Mini Hookah Shisha
Ọkụ Bamboo maka BBQ
Ngwaọrụ Anụ Mmịkpọ
Darkelves Acrylic Handle Ho ...
Portable Hookah Nịm na Pr ...
304 igwe anaghị agba nchara Barbecu ...
32 Inch High Quality gbatị ...
Ihe ngwugwu: 8.67 x 7.08 x 5.9inches; 3.08 n'arọ
Ụbọchị Mbụ Dị: June 16, 2021
Onye nrụpụta: Darkelves
Njirimara ngwaahịa: nnukwu anwụrụ ọkụ, obere nha, ịdị arọ dị arọ
Ngwaahịa: iko aluminom alloy
Onye n'otu n'otu, mgbochi dobe
Ntọala Hookah eburu ya na akpa nchekwa Akwa mma Popular Bottle Water Pipe Mini Hookah Shisha ụtaba na -ese anwụrụ anwụrụ Onyinye nke tube Myọcha
Ntọala Hookah eburu eburu na akpa nchekwa. Kit Mini Hookah Kit na akụkụ ya niile nwere ike ịsachapụ nke ọma na ndakpọ.
A na-eji Darkelves Kachasị Njem Hookah Set nke osisi aluminom dị elu nwere onye na-ekesa ya maka ịbịaru nwayọ na nzacha ka mma. Hookah njem ọgbara ọhụrụ nwere ikpe nchekwa nke ị nwere ike ibute gị ebe ọ bụla ma ọ bụ nwee anụrị n'ụlọ.
Sịga Shisha zuru oke - ị smokingụ sịga dị mfe nwere nnukwu igwe ojii, dị mfe ịchịkọta, saa ahụ, gbasasịa – nnukwu narguile setịpụrụ maka ụlọ na njem. Igwe mkpuchi silicone dị mma nwere njiri aluminom na njikọ na-agbanwe agbanwe na mmiri, na-enye ohere iji ya na-enweghị ihu ihu.
Ntọala Hookah Set nwere ike ịgụnye: isi ahụ, ogwe osisi, efere silicone na eriri nwere aka aluminom, isi iyi, njikọta, nkịta unyi, onye na -agbasa ihe, akpa njem ma ọ bụ akpa na akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ.
Nke gara aga: Hookah Set Micro Modern Transparent Acrylic Hookah Shisha Kit maka Ọkacha mma Shisha Hookah Siga Ọkụ & Clip & Pipe Hose Shisha Pipe Ọhụrụ alumini alloy roket okike hookah Narguile
Osote: Darkelves Acrylic Handle Hookah Hose nwere akwa dị mma nwere ike ịsacha
Darkelves mmanya na -egbu egbu siri ike na -eguzogide ọgwụ A ...
Darkelves High-Quality Extended Flint Gun Ignit ...
Darkelves Ngwaọrụ Anụ Mmịkpọ Anụ Mmịkpọ kichin ...
32 Inch High Quality Extendable Osisi eme B ...
Mbadamba iche iche maka unyi maka ihe nsure ọkụ ngwa ngwa unyi ...
Chicken Ụkwụ nku Rack 14 Ohere igwe anaghị agba nchara ...
AdreesịỤlọ 601 Nkeji 2, Owuwu 9, Dongxin Jinyuan, Xincheng Street, Ruian City, Wenzhou City, Province Zhejiang, China